China RCL-2118 Yakatasva-yakakwira LED Linear Mwenje fekitori uye vagadziri | Luxury
Iyo cir-clip mhando yakakwira-inoshanda LED mwenje, aluminium alloy mwenje muviri, yakasimba yekupisa maficha
uye hapana deformation, zvinobudirira kunatsiridza hupenyu hweMAI mashiripiti bead.
Kisimusi kadhi Orifice kuisirwa, ine mwenje mumvuri, iyo yekumusoro uye yezasi kumashure mativi matatu anovhenekerwa
shandisa kujekesa kumashure kwekupedzisira kwe21mm laminate, iyo kudzika kwakabatana neyakajairwa kudzika-13mm
Inoshandiswa pakati pemakabati, chinja mbiru dzeRoma.
Teerera kune mukaha uripakati pemapaneti emasuo kumativi ese
Inogona kuisa muKitchen makabati, wadhirobhu, Bathroom kabati uye imwe kabhodhi iyo inoda mwenje pakati pemakabati.
Chitubu kadhi Orifice kuisirwa
Zvakanakira mwenje yakatungamira ye LED
1, yakakwira simba yekuchengetedza
Simba-rinoponesa simba ndere nharaunda pasina kusvibiswa. DC dhiraivha, Ultra-yakaderera simba rekushandisa electro-Optical simba kutendeuka padyo ne100%, iyo yakafanana mwenje mhedzisiro inopfuura 80% simba-yekuponesa kupfuura echinyakare magetsi masosi.
2, hupenyu hwakareba
Chiedza chakatungamira mwenje sosi inonzi hupenyu hurefu, zvinoreva mwenje usingadzime. Solid inotonhora mwenje sosi, epoxy resin encapsulation, hapana chikamu chakasununguka mumuviri wechiedza, hapana zvikanganiso zvemwenje, zviri nyore kupisa, kupisa kwemafuta, kuora kwechiedza, nezvimwewo, uye hupenyu hwebasa hunogona kusvika 60,000 kusvika 100,000 maawa. , iyo yakapetwa kagumi kupfuura iya yechinyakare mwenje masosi. zviri pamusoro.
Inowanzo bvunzwa mibvunzo:
Mubvunzo: Tinogona here kusarudza chero hurefu hwemarambi emutsara?
Mhinduro: Hongu, tinogona kusarudza chero saizi yakatwasuka mwenje zvinoenderana nezvaunoda. Ndapota titiudze zvaunoda.
Mubvunzo: Unopa zvivimbiso zvezvigadzirwa here?
A: Hongu, garandi yemakore matatu inopihwa. Kana iwe uine chero mibvunzo, ndapota nyorera mutengesi wedu munguva
Mubvunzo: Nezve nguva yekuendesa?
Kazhinji, nguva yekuendesa ndeye 10-15 mazuva ekushanda. Zvinoenderana nezvamunoda, kana tichida kugadzira nyowani yealuminium alloy chiteshi, zvinotora nguva yakawanda
Mubvunzo: Unogona here kupa mamwe masampuli?
A: Ehe, isu tinogona kupa masampuli emahara, uye mari yekutumira inotakurwa newe.
Mubvunzo: Tinogona kugadzirisa mwenje mwenje yatinoda
A: Ehe, ndapota tiudze zvinodiwa nemarambi emutsara zvakadzama, kana iwo madhirowa. Kusanganisira iyo nhamba yemarambi mabheji anoshandiswa, kusarudza mwenje wechiedza, mwenje unodziya kana kutonhora mwenje. Isu tinokupa iwe mhinduro iri nyore.
Mubvunzo: Kune hushoma hwehuwandu hweodha yeodha?
A: Low MOQ, mutengo unogona zvakare kutaurirana zvinoenderana nehuwandu hwako.
Pashure: Wholesale RCL-2518 akatungamira mwenje mwenje mwenje mwenje
Zvadaro: RCL-2420 Yakadzokera-yakakwira LED Linear Chiedza
RCL-2520 Yakadzika-yakakwira LED Linear Chiedza
RCL-3620 Yakakwira-yakakwira LED Linear Chiedza
RCL-2420 Yakadzokera-yakakwira LED Linear Chiedza
RCL-2720 Yakadzoserwa-yakatungamirwa LED Linear Chiedza
RCL-2616 Yakadzoserwa-yakatungamirwa LED Linear Chiedza